Rail System Investment muIstanbul Ichasimudzirwa, Dzimba Dzemuchina Dzinotarisirwa - RayHaber
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulRail System Investment muIstanbul Ichawedzerwa, Dzimba Dzemuchina Dzinotarisirwa
Rail System Investment muIstanbul Ichawedzerwa, Dzimba Dzemuchina Dzinotarisirwa
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, Railway, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Metro, TURKEY 0
njanji system mainvestment achawedzerwa muIstanbul, matekiniki edzimba achapihwa huremu
Kubva pane iyo "Rail System" musangano wakarongwa neIMM mayuniti, zvakasarudzwa kuti zviwedzere kukurumidza mari yekudyara uye kutarisisa hunyanzvi hwekugadzira dzimba.
Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) Rail System Dhipatimendi yakaronga Sistem Rail System ıyla musangano pamwe nekutora chikamu kwevadzidzi kubva kumayunivhesiti akasiyana siyana. Ibrahim Orhan Demir, Mutevedzeri woMunyori Mukuru Wezvekutakura Nzvimbo Yakatenderera akataura hurukuro yekutanga yemusangano uye akakwevera kukosha kwechirongwa chechitima.
Ray Iyo njanji ndiyo yekutanga yedu yekutanga kana tichigadzira nzira dzekufambisa. Masisitimu enjanji akakosha kugadzirisa mhinduro yeIstanbul yekufambisa uye matambudziko ekusvika .. İbrah İbrahim Orhan Demir akati nekuwedzera kwehuwandu hwemotokari mumakore achangopfuura, traffic yakawedzera kuwanda.
Demir akati, "Isu tiri kuona kuti kuchave nekubvumirana kwakawanda kuti Istanbul ndiyo mhinduro yezvitima uye kuti zvekufambisa hazvigadziriswe munzira." Ndinovimba mhedzisiro yacho ichajekesa isu uye isu tichafambisa basa redu muchinyorwa chino. ”
Chikamu chekutanga chemusangano wemisangano mitatu pa ”Inoshanda, ichivakwa uye yakarongwa masitirini u waiitwa neITU Civil Engineering Dhipatimendi pamudyandigere. Dr. Haluk Gerçek,,, "Tekinoroji inovandudza nzira muzvitima" pane chechipiri chikamu cheFeneral of Electrical uye Electronics Faculty yeIstanbul Technical University. Dr. Yakatungamirwa naMehmet Turan Söylemez.
METROTS ACHADAURA, DOMESTIC TEKNOLOGI ICHASHANDWA
Iyi sarudzo dzinotevera dzakatorwa kubva kumusangano uko kwaitaurwa nezve subjectsşbirliği Kugoverwa kwemotokari kuburikidza neCooperation Cooperation Project (SIP) “uye” Domestic signaling pro da yakakurukurwa zvakare:
-Kutungamira kunogadzwa kune mitsara iyo ichaiswa zvakare uye yakamiswa kwenguva yakareba nekuda kwezvikonzero zvemari.
- Mitsetse mitsva yakarongwa ichaongororwa nehurongwa hwekufambisa hwekufambisa uye mukati mehosi yezvirongwa zvepamusoro-zvino.
-Kuvandudza tekinoroji yemuno njanji ichazopihwa pekutanga.
3. ASLI ŞAHİN AKYOL - RAYLI SYSTEM ZVINANGWA ZVINOGONESESA UYE DZIDZO DZIDZO
1. FAHRETTİN ÖNER - BIM APPLICATIONS IN IMM RAIL SYSTEM ZVINANGWA
Zvakatenga Zvitiso: Zvigadzirwa zvichatengwa (nokuda kwekutendeuka kwechigadziri chesimbi mashekeri masikirwo kusvika kukhonkiti zviremba) 22 / 04 / 2013 TCDD Enterprise l. Regional Directorate of Supplies vachava kutengwa (yokutendeutsa resimbi Catenary kurema chesamende uremu hurongwa) PAKAVHA OF THE MUNYORO nenyaya chokuita ndakawonekana Article 1- Business Muridzi Information Administration 1.1. Business muridzi Administration; a) Name: TCDD xnumx.bölg Directorate Haydarpasa b) Address: TCDD xnumx.bölg Directorate of Commission Bureau Station Building xnumx.kat Haydarpasa / Istanbul c) nhamba Runhare: (1) 1 3 0216 d) Fax nhamba: (337) 82 14 0216 e) e-mail: - f) akakodzera vashandi zita uye anonziwo / title: Chief Suat AKCAN Commission 337. Bidders ruzivo chokuita zvokuvakisa vashandi aitarisira pakero iri pamusoro apa uye nhamba ...
Tichafunga nezvekutsvaga kweElvan Railway 22 / 01 / 2015 Elvan Tichaisa pfungwa pamusoro pezvikwereti zvezvitima: Mutungamiri wekutakura, Maritime Affairs nekukurukurirana Elvan, Tichafunga nezvekusima kwezvitima munguva inouya. Gore rino tichapedza mapurundi emadhora makumi mapfumbamwe emadhora emasitima. 7,5'dan zvichida tichawana mari mumigwagwa "Mutungamiri, Mutambi Wemitambo uye Nhepfenyuro Mutungamiri Lütfi Elvan, vanofambisa ngarava, vanoda kuzarura makwikwi nehurukuro," Yese yatiri kugadzirira izvi. 2016-1 mwedzi in'll kuzvitsanangura, ticharamba vomurova kushanda nokuda mazvake pakati njanji, "akati. Elven, mukutaura kwake pamusangano wakaitwa panguva Unity Foundation, akati kuti Turkey raMwari achangodarika 2-12 kwemakore zvinokosha chaizvo pfuma kubudirira. Kuona Turkey somunhu kusimukira uye kuwedzera nyika Elvan akatanga nezvechimwe, "Turkey, ...
Meya Karaosmanoğlu: Kutakura kucharemerwa muNew Era 08 / 12 / 2013 Meya Karaosmanoğlu: Kutakura kucharemerwa muNew Era. Karaosmanoğlu, uyo ari muGebze, ari kusangana nesu. Tinopinda mu 30 yedu. Manisheni ibasa rinoitirwa vanhu vose, kubatsira hupenyu hwevanhu. Sangano richasangana nezvinhu zvinowanzodiwa. Iri ndiro basa revanhu, rutivi rwakanaka kwazvo rwehurumende. Mabasa akanaka. Mugore rekupedzisira re10 gore Kocaeli rakachinja. Kuchinja uku nekushandurwa, guta kuti ribudirire, kurarama muguta rakanaka richaramba richiita basa, akadaro. TICHAKATIRWA KUZVIMBO PAKUTANGA, Mutungamiri Karaosmanoğlu vakati vachatarisa nezvekufambisa uye nzira dzezvitima, A Union pamweness U
70 Bhiriyoni TL Kukosha Kwezvitima Zvekutsvaga Mari, Makambani Okumusha Anodana Kutsigirwa 13 / 05 / 2012 Architects uye Engineers Kadem Group Vice President yakashapa, mabhiriyoni 70 mutengo TL njanji hurongwa kuti nangananga mari, pamwe mudzimba yemakambani kupinda kuzadziswa chirongwa ichi yaizoramba muTurkey mari iyi, akati. Kadem Eksii, vamiriri vemaMutungamiri weboka re Architectors and Engineers, vakashanyira Rize Press Centre nhasi uye vakagovera pfungwa dzake pamusoro peOvit Tunnel iyo ichaiswa naHurezidhendi Recep Tayyip Erdoğan muna May. Ovit Tunnel Turkey kuti 'Emerald-muUri Ankai' uye Sour zvichiratidza kuti imwe nebudiriro chirongwa, "Ovit zvino Sea Black gomo yemakomo pamwe mugero ichange kurega kuva safambika, Rize-Erzurum mugwagwa iyo 13 kiromita achadonha kusvika 250 makiromita. ...
Kugadzira uye Kuburitsa Zuva Rekushandisa Bursa rakachengetedzwa kumusha uye nehupfumi hwehupfumi 11 / 06 / 2018 BCCI Sachigaro Ibrahim Burkay, pasinei Turkey yose matambudziko uye zvipingamupinyi kucherechedza kuti akaramba pakati kukurumidza kuwedzera upfumi munyika, "Local uye nyika kugadzirwa tichinatsa sei mano edu, kuti nedoro wenyika yedu acharamba kuramba kuti zvikuru. Guta redu rinoita basa rinokosha mune izvi. Kune makambani akawanda Bursa wedu siginicha omunharaunda uye omunyika zvirongwa kuitwa Turkey. "Iye akati. BCCI President Abraham Burkay, Turkey kuti kutsiga enyika uye zvoupfumi nebudiriro dzepasi kwezvakatipoteredza uye nyika iri kusangana ne negodo, akati abudirira kuwana simba kuona pachake magumo ayo. Kuwedzera-kuwedzerwa kubudiswa, kutengeswa kunze kweKat
MuEskişehir, vadzidzi vakaverenga mabhuku patangi uye vakapa zvipo kuvagari
Zvinotaurwa NeVadzidzi veHacettepe kuSolo Bhasi Chishandiso
Zvakatenga Zvitiso: Zvigadzirwa zvichatengwa (nokuda kwekutendeuka kwechigadziri chesimbi mashekeri masikirwo kusvika kukhonkiti zviremba)
Tichafunga nezvekutsvaga kweElvan Railway
Meya Karaosmanoğlu: Kutakura kucharemerwa muNew Era
70 Bhiriyoni TL Kukosha Kwezvitima Zvekutsvaga Mari, Makambani Okumusha Anodana Kutsigirwa
Infrastructure Investments GMAnkara Subways Project Zviitiko zvitsva zvakagadzirwa kuti kuwedzere kushandiswa kwemabasa ekuvaka e3 Metro line
CEVA Logistics akawedzera upfumi ayo muTurkey
Esray inokurumidza kusimbisa zvikwereti uye inotarisa kutengeserana kwekutsvaga